အိပ်ရာထဲလှဲရင်း စာရိုက်၊ စကားပြောရတာကို စွဲလမ်းနေခြင်းက တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်ထိခိုက်လာနိုင် – Trend.com.mm
Posted on December 27, 2017 April 10, 2019 by Wint
တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာအရ လူတွေက အသစ်အဆန်းတွေမြင်ရင် သိပ်စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုပေးစေတဲ့အရာမျိုးဆို စိတ်ကစွဲသွားပြီး မကစားရမနေနိုင်၊ မသုံးရမနေနိုင်တွေဖြစ်လာတော့တယ်။ ညဘက်အိပ်ရာဝင်တာနဲ့ တန်းမအိပ်ပဲ ဖုန်းသုံးနေတာတို့၊ အိပ်ရာထဲ
လှဲရင်း ဖုန်းနဲ့စာရိုက်စကားပြောခြင်းက သင့်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒုက္ခရောက်အောင် အစပျိုးနေတဲ့ အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့ ညက ကိုယ်ဘာစာတွေပို့ထားလဲဆိုတာ ပြန်မစဉ်းစားရတာမျိုးဖြစ်ဖူးလား? ထူးဆန်းမနေပါနဲ့ ။ ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ စမတ်ဖုန်းတွေပေါ်လာတာ တစ်ခုကောင်းပေမယ့် တစ်ဖက်မှာလည်း ဆိုးကျိုးတွေရှိနေပြန်ပါတယ်။ အိပ်ရာထဲ စာရိုက်စကား
ပြောခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ရင်း စာရိုက်နေခြင်းတို့ဟာ အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့လည်းသိပြီးလောက်မှာပါ။ လမ်းကူးနေရင်း ဖုန်းမပြောရဘူးတို့ ၊ နားကြပ်တပ်ပြီး လမ်းမလျှောက်နဲ့ဆိုတာတွေဟာ တကယ်ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေရှိလို့ တားဆီးသတိပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ခေတ် မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တော့ စမတ်ဖုန်းဟာ စွဲလမ်းစရာအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှ တစ်ခါ ဒီဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို မကြည့်ရရရင်မနေနိုင်ပါဘူး။ အိပ်နေရင်းဖုန်းသုံးခြင်းက မသိစိတ် ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း ၊ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်နိုင်ခြင်းနဲ့ မျက်လုံးအမြင်ဝေဝါးခြင်းတွေ
သူငါ့ကို စာပို့ထားတယ်… ငါပြန်လိုက်ဦးမယ်။ သူငါ့ကို ကွန့်မန်ပေးထားတယ်.. ငါပြန်ရဦးမယ်… သူဘာပုံတွေတင်ထားမလဲ မသိဘူး.. ငါဝင်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်…။ ဒီလိုအတွေးပေါင်းများစွာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖိအားပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲလား ! အိပ်တဲ့အချိန်မှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝအိပ်ပါ။ ဦးနှောက်ကို
အနားပေးပါ။ အာရုံက တစ်ခုတည်းပဲအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်။ အာရုံတွေအရမ်းများရင် သင်စိတ်ဖိစီးလာပါလိမ့်မယ်။ မသုံးနဲ့ မပြောလိုပါဘူး။ သုံးပါ…။ ”တန်ရင် ဆေး၊ လွန်ရင် ဘေး ” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အလွန်အကျွံအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပဲထိခိုက်ရပါလိမ့်မယ်။